Xidhibaanada barlamaanka Soomaaliya oo ka soo horjeestay qaabkii ,,,,,, |
Xidhibaanada barlamaanka Soomaaliya oo ka soo horjeestay qaabkii ,,,,,,
Gudoomiyaha Gudiga Arrimaha Gaadiidka Baarlamaanka Soomaaliya Xildhibaan Cismaan Aadan Dhuuboow oo la hadlay warbaahinta Maxaliga ah, ayaa sheegay in gudiga uu aad u dhaliilsan yahay qaabka ay u dhacday kala wareejinta Dekadda Magaalada Muqdisho.
Xildhibaan Cismaan Aadan Dhuuboow, ayaa sheegay in wado qaldan loo maray wareejintaasi, waxa uuna ku tilmaamay mid Sharcidaro ah.
Sidoo kale, waxa uu tilmaamay in qaabkii loo maray Shirkadii Shalay lagu wareejiyay Dekadda Magaalada Muqdisho ay tahay mid aan la koontaroolin islamarkaana u muuqaneyso in lala baal-maraayo sharciga,waxaana uu xusay in Shirkadda Turkiga laga leeyay ee Shalay la Wareegtay Maamulka Dekadda ay ka horeeyeen Shirkado kale.
Gudoomiyaha Gudiga Arrimaha Gaadiidka Baarlamaanka, sidoo kale waxa uu Eedeen ujeediyay Maareeyaha Dekadda Magaalada Muqdisho,iyadoona uu sheegay in Maareeyahay uu diiday in Gudiga Arrimaha Gaadiida Baarlamaanka Soomaaliya ay la Xisaabtamaan oo ay wax ka weydiiyaan Arrimaha Dekadda Muqdisho.
Haddalka Gudoomiyaha Gudiga Arrimaha Gaadiidka Baarlamaanka, ayaa waxa uu imaanayaa iyadoo maalinimadii shalay Wasaarada Dekaddaha iyo Gaadiidka Badda iyo Maamulka Dekadda ay wadajir ugu wareejiyeen Shirkad laga leeyhaay Dalka Turkiga,waxaana Durba soo baxay Diidmo arrintaasi ku aadan.